Tartanka Masaakiinta Iyo Maalqabeenada | Xisbiga Xuriyada (The People Of Freedom)
Waxaa tartan adagi dhexmaray Masakiinta iyo maalqabeenada, isagoo mid waliba robo inuu cadeeyo inay iyagu ka qiimo iyo khayr badan yihiin kuwa kale.
Masakiintii waxay dheheen: “Anagaa idinka sharaf iyo khayr badan, maxayeelay Nabi Muxamad (NNK) saboolnimo ayuu ka doortay hodanimo.”
Maalqabeenadiina waxay dheheen: Maya Anagaa idinka sharaf badan, maxayeelay hodannimadu waa tilmaan kamid ah tilmaamaha Ilaahay (swt), (Ilaahay waa hodan, idinkuna waad baahantihiin).”
Masakiintiina waxay dheheen: Anaga naguma waajibin Sakada iyo Xajku, nalamana weydiin doono, idinkase waxaa laydin weydiin doonaa xabad kasta, shilin kasta iyo shay kasta oo aad hantideen, xageed kakeentay, xageedse ku bixisay (Qofku ka dhaqaaqi maayo banka qiyaame ilaa 4-Su’aalood laga weydiiyo, maalkiisii xagee kasoo shaqaystay, muxuuse ku bixiyay).
R/wasaare Saacid oo diiday in Farax Cabdiqaadir laga dhigo wasiir iyo Madaxweyne Xasan Sheikh oo ka xumaaday.(Xog-Rasmi ah oo Lasooo Helay) Warar Dheeraad ah oo ku saabsan Shiikh Axmed Madoobey oo Amar ku Bixiyey in Wafdi ka socda Midowga Afrika, Amisom iyo Dowlada Federaalka aysan soo geli Karin Kismaayo inta laga Dhoofinayo Dhuxusha